iHost : Web Hosting & Domain
မိမိလုပ်ငန်းအမည်ဖြင့် Email ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည့် အခွင့်အရေး
ကိုယ်ပိုင် Email Name ဆိုတာ ဘာလဲ?
မိမိလုပ်ငန်းအမည် နဲ့ Email Service တစ်ခုကိုအသုံးပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Webmail နှင့်သာမက Outlook(POP3,SMTP,IMAP) တွေမှာပါအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။Emailတွေထဲ Spam တွေ မဝင်အောင် စစ်ထုတ်ပေးခြင်းနဲ့ Virus ကာကွယ်ပေးခြင်းများအား ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ ပြည်တွင်းရောပြည်ပမှာသုံးနေတဲ့ Server Bandwith အတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် လုပ်ဆောင်မှုမြန်ဆန်ပြီး နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်းမရှိကြောင်းအာမခံပါသည်။
သတ်မှတ်ထားသော Storage အတွင့် Accountအသစ်များစိတ်ကြိုက်ဖွင့်နိုင်ခြင်း။ Mail Severအတွက်အထူးသီးသန့် SSD ကိုအသုံးပြုထားခြင်း။ လုပ်ငန်းအမည် မိမိစိတ်ကြိုက် Domain Name ဖြင့် Email အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။ Virus နဲ့ Spam အားအချိန်နှင့်တပြေးညီကာကွယ်ပေးထားခြင်း။ Cloud Server ကိုအသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် Downtime မရှိခြင်း။ ကိုယ်တိုင်စီမံထိန်းချုုပ်နိုင်သော Control Panel ပေးထားခြင်း။
Cloud Server ပေါ်မှာ Email Service လုပ်ထားတဲ့အတွက် server device ချို့ယွင်းရင်တောင် DownTimeမဖြစ်စေရန် ၁၀၀%အာမခံခြင်း။
မိမိဝယ်ယူထားသော Storage အရ Customer လိုအပ်သလောက် အကောင့်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ Email Account အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
အကောင်းဆုံးနှင့် သုံးရအလွယ်ကူဆုံး Control Panel မှတဆင့် User ကိုယ်တိုင် account များကိုထိန်းချုပ်စီမံနိုင်ခြင်း။
Email Server System အား Webmail,Outlook, IMAP,SMTP and SSL Certificate တွေနှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားခြင်း။
အခန်း(၅) ၊ သစ်တောလမ်း ၊
တရုတ်ဘုံကျောင်းအနီး ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။
Room (5),Thit Taw Street, Near Chinese Temple,
+(95) 9977870421 , +(95) 9795938304
iHost helps your business more better.
iHost is your perfect partner to help move forward on the internet, because asalocal company, we will be with you every step of the way, with full phone support and comprehensive email support as well.
© 2019 iHost. All Rights Reserved | Design by T2A